basic electronic studying [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > အင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ် > အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာပညာ > basic electronic studying
View Full Version : basic electronic studying
သင်အီလက်ထရောနစ်ကို စတင်သင်ယူလိုပါလျှင်အောက်ပါအခြေခံများကိုသေချာစွာလေ့လာရမည်။ElectronicTheoryများကိုတွက်ချက်သင်ကြာ်းလို.ရပေမယ့် လက်တွေ.ပိုင်းဆိုင်ရာများကိုမိမိနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးသော Electronic ဆိုင်များတွင်လေ့လာသင့်ပါတယ်။ဆက်လက်ရေးသားပါဦးမည်။
အခြေခံအီလက်ထရောနစ်ပညာရပ်မှာelectronic ပညာရပ်မှာသုံးတဲ့ componetsတွေရဲ့အကြောင်းကိုသေသေချာချာသိအောင်မလုပ်သင့်ပါ။လုပ်သင့်တာက electronic components တွေရဲ့အကြောင်းကို အနည်းငယ်သိရုံ သိအောင်သင်ယူပါ။တစ်မျိုးတည်းကိုအများကြီးသိတာထက်စာရင် အများအပြားကိုခြုံငုံသိထားတာပိုမိုထိရောက် လွယ်ကူပြီး တတ်မြောက်တာလွယ်ကူပါတယ်။ မသိမဖြစ်သိသင့်တဲ့အရာတွေက
ခဲဂဟေ(soldering)ဆော်တဲ့အပိုင်းကမသိရင် လွယ်မယ်ထင်ရပေမဲ့တကယ်ဆော်တဲ့အခါမှာ ထင်သလောက်မလွယ်ကူလှပါဘူး။ဒါကြောင့် မိမိအိမ်မှာရှိတဲ့ electronic component တွေဖြုတ်လို. တပ်လို.ရတဲ. electronic deviceအပျက်(မီးချောင်းချုပ်) နှင့် အခြားအပျက်တွေကိုဖြုတ်လိုက်တပ်လိုက် လုပ်ခြင်းအားဖြင့်လေ့ကျင့်နေသင့်ပါတယ်။ဒါကတော.ခဲဆော်တဲ့အပိုင်း ။soldering အပိုင်းမှာလည်း
ခဲခွေ ၊ခဲဂေါက်၊ထင်းရှုးဆီ(အခဲနှင့်အရည်)နှင့်sucker(ခဲဆုပ်တဲ့အရာ)။ဒါ့အပြင် sucker မရှိရင်အမျှင်များများပါတဲ့wire များမရှိမဖြစ်ရှိထားသင့်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ လဲelectronicကိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်။မတတ်ပေမယ့်သိထားချင်လို့ ပါခင်ဗျာ.
ခဲဆော်မယ်ဆို ရင် သထိထားရပါတယ်
ကျွမ်းကျင်တဲ့ လုပ်နေကျလူတွေအတွက်တော့ လွယ်ကူတာပေါ့
မဆော်တတ်ရင်တော့ သူ့ရဲ့ component တွေပျက်စီးသွားနိုင်ပါတယ်
Capacitor ကတော့ Voltage တွေကို Store လုပ်ပေးပါတယ်
Inductor ကတော့ Current တွေကို Store လုပ်ပေးပါတယ်
A semiconductor device that converts alternating current to direct current.
Fig:Figure 2: Various semiconductor diodes. Bottom: A bridge rectifier
င်္Fig : Diode
Fig :zener diode
Fig :SCR ( Silicon Control Rectifier
အစ်ကို thura tun ရေ
ကျွန်တော် နောက်နေ့တွေကို စောင့်မျှော်နေတာပါ
ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့ ပါဗျာ ။
Ko Thura Tun မင်္ဂလာပါ
တစ်ခုလောက် အကြံပေးချင်လို့ပါ .. အမှားပါရင်ခွင့်လွတ်ပေးပါ ..
စပြီးလေ့လာသူများအတွက် Resistor အရောင်ကို ကုတ်နံပါတ် ဖတ်နည်းလေးကနေ စပြီးသင်ပေးစေလိုပါတယ်။
အနက် - ၀
အညို - ၁
အနီ - ၂
လိမ္မော် - ၃
အဝါ - ၄
အစိမ်း - ၅
အပြာ - ၆
ခရမ်း - ရ
မီးခိုး - ၈
အဖြူ - ၉ ဒီအရောင်လေးတွေကနေ ကုတ်နံပါနတ်ဖတ်နည်းလေး ပေးမယ်ဆိုရင် စပြီးလေ့လာသူ သူငယ်ချင်းများအတွက် ပိုပြီး အဆင်ပြေနိုင်ပါသည်။
အဲ့ဒီcode numberတွေကိုဘယ်နေရာမှာသုံးဖို့အတွက်ခွဲခြားသိဖို့လိုတာလဲဟင် ???
resistor color တွေက တစ်ချို့သော circuit board တွေမှာ resistor ကို တန်ဖိုးဖြင့်မဖော်ပြပဲ ကာလာနဲ့ ဖော်ပြထားပါတယ် ။
အဲ့ဒီအခါကျရင် မိမိက အဲဒီ resistor တန်ဖိုးကို သိချင်တယ်ဆိုပါက ကာလာဖတ်နည်းကို သိဖို့ လိုပါလိ့မ်မယ် ။
ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း resistor တွေကို အဲလိုကာလာလေးတွေနဲ့ ဖော်ပြလေ့ရှိကျပါတယ် ။
ဒီနေရာမှာ ကာလာလေးတွေကို တန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ် ။ အနီမြင်ရင် နံပါတ်ဘယ်လောက် စသဖြင့်ပေါ့ ။
ဒီနေရာမှာ ကာလာကုတ်ဖတ်တာကတော့ အပေါ်ဆုံးကပုံအတိုင်း 1st Band ကိုအရင်ဖတ်ရပါတယ် ၊ ပြီးမှ အစဉ်အတိုင်း ထပ်ဖတ်တာပေါ့ ။
ဖတ်နည်းကတော့ အပေါ်ဆုံးပုံကို ဥပမာကြည့်ရအောင် .. ပုံမှဆို နီ ၊ ခရမ်း ၊ စိမ်း ၊ ရွှေ ဆိုပြီး ကာလာ ၄ ရောင်တွေ့ရပါမယ် ။
ဒါဆိုရင် ဒုတိယပုံက နံပါတ်တွေအတိုင်း
နီဆို ၂ ၊ ခရမ်း ၇ ၊ စိမ်း ၅ ဆိုတာ တွေ့ ရပါမယ် ။ တွက်နည်းကတော့
ပထမကာလာ 1st band &amp; 2nd band ကိုတွဲယူပြီး နောက်က Multiplier ဖြစ်တဲ့ စိမ်းက သုည(zero) အရေအတွက်ကို ဖော်ပြပါတယ် ။
အရင်ဆုံးမြင်တွေတဲ့ ကာလာ ၂ ခုကို ပူးတွဲအစဉ်လိုက်ယူပြီး ၃ ခုမြောက်ကာလာနဲ့ မြှောက်တာပါ( ၃ ခုမြောက်ကာလာနံပါတ်သည် သုည(zero) အရေအတွက်ဖြစ်သည်)
ရှင်းမှ ပိုရှုပ်သွားမယ်ထင်တယ် ..
ဆိုတော့ အပေါ်ဆုံးက ပုံကို ဖတ်ရင် ဒီလိုလေးဖြစ်မယ်ပေါ့ ။
2700000 ohm ပေါ့ ။
နောက်တစ်ရောင် ရွှေကတော့ tolerance ပေါ့ ။ သူက +or- 5% ကြားမှာရှိပါတယ် ။
resistor ရဲ့ တကယ့်အမှန်အကန်တန်ဖိုးက အဲဒီ 5% ယူလိုက်တဲ့ကြားမှာ ရှိမယ်ပေါ့ ။
full wave rectifier, half wave rectifier နဲ့ bridge rectifire အကြောင်းလေးများပြောပြနိုင်ကြမလားခင်ဗျာ.... ??? ??? ???
AC ကနေ DC ကို convert ပေးတဲ့ circuit ကို rectifier circuit ဟုခေါ်သည်။ rectifier circuits ကိုနည်းလမ်းသုံးခုဖြင့်တည်ဆောက်နိုင်သည်။
၎င်းတို့မှာ 1. half wave rectifier (using 1 diode)
2 . full wave rectifier(using2diodes )
3. full wave rectifier (using4diodes).call bridge rectifier.
ပထမဆုံးအနေနှင့် circuit တည်ဆောက်ဖို့အတွက် rectifier diode လိုအပ်တယ်။ electronic circuit အများစုဟာ dc နဲ့အလုပ်လုပ်တာများတယ်။ဒါကြောင့် tv,dvd,
amplifier စသည့် စက်များသည် only dc ဖြင့်သာ အလုပ်တာကြောင့် rectifier circuit သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
half wave rectifier circuit တွင် diode တစ်လုံသာ လိုပါသည်။ rectifier diode ၏လုပ်ဆောင်ချက်မှာ အ၀င် ac voltage ကို dc voltage အဖြစ်ပြောင်းပေးနိုင်
သည်။ သို့သော်ထွက်ရှိလာသော dc voltage သည် dc real တော့မဟုပ်ပေ။ ထိုကြောင့် circuit output တွင် filter capacitor (2200 uf ) ကို အသုံးပြူရပေသည်။
ဒါမှသာ dc voltage နီးပါး အသုံးပြုနိုင်လေသည်။
full wave rectifier တွင် diode2လုံးအသုံးပြုတာ နဲ့ diode 4လုံး အသုံး ပြုပုံ ဟူ၍ကွဲပြားသည်။ ဤသို့ကွဲပြားမူသည် transformer အပေါ်တွင်မူတည်သည်။
transformer တွင် pin သုံးခုပါရင် diodeနှစ်လုံးကိုအသုံးပြုရမည်။ transformer တွင် pin နှစ်ခုပါရင် diode လေးလုံးကို အသုံးပြူရ မည်။
from mg kyi thar ///////////////////////